bauma တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပွဲဦးထွက် 2016 XCMG ရဲ့ "မမြင်နိုင်သောချန်ပီယံ" "တီထွင်မှု" စစ်တုရင်ကစားဘယ်လို Witness ၏ - တရုတ်ရှန်ဟိုင်းထမြောက်တော်မူ
အဆောက်အအုံ & ကွန်ကရစ်
Logistic & သိုလှောင်
အရောင်း & န်ဆောင်မှုများ
သတင်း & Events
bauma တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပွဲဦးထွက် XCMG ရဲ့ "မမြင်နိုင်သောချန်ပီယံ" "တီထွင်မှု" စစ်တုရင်ကစားဘယ်လို 2016 ကသက်သေခံ
အဆိုပါထုတ်ဝေနေ့စွဲ: 241: ဖေဖော်ဝါရီ-03-2017 အရေအတွက်က Read
ထိပ်တန်းအင်ဂျင်နီယာစက်ယန္တရားအဖြစ်အပျက်အတိုင်း "bauma တရုတ်" (ဆောက်လုပ်ရေးစက်များအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲ, အဆောက်အဦးပစ္စည်းစက်များ, သတ္တုတွင်းစက်များနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးယာဉ်) တရုတ်စျေးကွက်ထုတ်ကုန်အတွက်ကမ္ဘာကသုတေသနပြုပြသထားတယ်မသာနှင့်တရုတ် client ကိုအတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဒါပေမယ့်လည်းကမ္ဘာကြီးကိုပြောတယ် ကျွန်တော်နည်းပညာ, ဉာဏ်ပညာနှင့်တီထွင်မှုနှင့်အတူအနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တွန်းအားပေး၏တာဝန်ယူရန်ရှိကြ၏။ ဒီနယ်ပယ်ဘယ်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီကြီးပြိုင်ဘက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့မှာတော့ XCMG, ရှိသမျှယခင်ဝိုင်း၌အသစ်သောစက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းညွန်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကိုလည်းတရားဝင်၎င်း၏ကြေငြာပေးသည် - "သင်တို့အဘို့တီထွင်မှု, အသိဉာဏ်ကုန်ထုတ်" ။ ပိုကောင်းတဲ့ဘာသာရပ်အနက်ကိုဘော်ပြခြင်းငှါ, အံ့သြဖွယ်အဓိက frame ကိုစပျစ်သီးပြွတ်ပြပွဲစီစဉ် မှလွဲ. XCMG ကိုလည်းအဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများမိသားစုမိတ်ဆက် - စက်ပစ္စည်းကိရိယာများအကြား "မမြင်ရတဲ့ချန်ပီယံ" ။
အသိဉာဏ်, စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် XCMG များ၏အင်ဂျင် core ကိုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်သစ်ကိုပုံမှန်အောက်တွင်မြင့်မားသောအဆုံးပုံစံကိုချိုးဖျက်ဖို့ချမှတ်။ "တရုတ်ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ 90% ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ သော့ချက်ကနောက်ဆုံး 10% အောင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဧဝရက်တောင်မှပြီးခဲ့သည့်တရာအနည်းငယ်မီတာတက်ပြီးကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာပိုပြီးပါဝါပိုပိုက်ဆံပိုဉာဏျပညာနှငျ့ကိုပိုမိုအခွက်တဆယ်။ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစောပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများများအတွက်တီထွင် "စစ်တုရင်" XCMG ထွက် lay မှစတင်နေပြီနိုင်ငံတော်သမ္မတ & အတွင်းရေးမှူးပါတီကော်မတီဝမ်အောင်မင်းကအဆိုပြုထား "ဧဝရက်တောင်သီအိုရီတက်ခြင်း" လိုပဲ "လိုအပ်နေပါသည်။ သူတို့တွင်, Ltd XCMG ဟိုက်ဒရောလစ် Co. , 1975 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု & အစိတ်အပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း, အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံးထက်မကအခြားအမှုအရာပေါ်တွင်မူတည်သည်ကျိန်အပ်သောအလုပ်စစ်တုရင်ကစားအပေါင်းတို့နှင့်တရုတ်ကျော် XCMG ပစ္စုပ္ပန်၏ဟိုက်ဒရောလစ်ဒြပ်စင်အောင်ပင်မှနေသည်ဟုသူအတွက်တင်ပို့ ထောက်လှမ်းရေးများက featured High-end ထုတ်ကုန်များ၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်အခြေခံပြီးထိုကဲ့သို့သောဥရောပ, အမေရိက, ရုရှားနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံအဖြစ်နီးပါးကိုပိုမို 20 ထက်နိုင်ငံများနှင့်ဒေသများ, စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမျိုးမျိုးသောဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်း၏အဓိကဘောင်အကြားထွန်းလင်း, ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးစက်ပစ္စည်းများ, သတ္တုတူးဖော်ရေး စက်ပစ္စည်း, သင်္ဘောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်တူသောနှင့်နောက်ဆုံးတွင်လွတ်လပ်သော core ကိုစိတျအပိုငျးမြားနှငျ့အစိတ်အပိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးဆောင် "မမြင်ရတဲ့ချန်ပီယံ" ဖြစ်လာသည်။
"Valve" ထုတ်ကုန် "ထောက်လှမ်းရေး" နဲ့ High-end ထုတ်ကုန်ပုံစံမှတဆင့်ကိုချိုးဖျက်
"အသိဉာဏ်ကုန်ထုတ်" ၏အယူအဆငါ့ကိုနှိုးသကဲ့သို့, အော်တိုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသိဉာဏ်နည်းပညာများလွန်ကဲကဲကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးနေပါသည်, အရာနောက်ထပ်ထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးမြင့်တည်ငြိမ်အာမခံနှင့်စစ်ဆင်ရေးထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်ပေမယ့်လည်းထုတ်ကုန်တူဖျက်သိမ်းရေးနှင့်အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးအားချဲ့ထွင်ဘို့အသစ်တစ်ခုလမ်းဖွင့်လှစ်မသာ။ သိသိသာသာအခွင့်အလမ်းကိုကျက်ခြင်းအားဖြင့်, XCMG ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကို High-end ဟိုက်ဒရောလစ်ဒြပ်စင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလယ်ပေါ်တွင်သူတို့သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအာရုံစူးစိုက်။ ဂျာမဏီကနေနယ်သာလန်နှင့် FT ထံမှ AMCA ပေါင်း XCMG ၏ဥရောပသုတေသနစင်တာတည်ထောင်ခြင်း, ဟိုက်ဒရောလစ်ဒြပ်စင်အပြည့်အဝမိသားစုအသွင်သဏ္ဌာန်ကိုယူဆောင်နေပါတယ်တဲ့ "တကမ္ဘာလုံး + ညှိနှိုင်းလွတ်လပ်စွာဆန်းသစ်" R & D ecosphere - XCMG အဖြစ်နှစ်ခုကိုဥရောပလုပ်ငန်းများရရှိခဲ့သည်။
လေထုရေချိုးခန်း 15 စက္ကန့် dedusted ခံရပြီးနောက်သင်တစ်ဦးနီးကပ်-type အမျိုးအစားစဉ်ဆက်မပြတ်-အပူချိန်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ရိုက်ထည့်ပါ။ စက်၏ကိုလှိမ့နား၌ကိုပဲ့ပေမယ့်, ပတ်ပတ်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောမဟုတ်စစ်ဆင်ရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်အလွန်အမင်းအော်တိုထုတ်လုပ်မှုအဆင့်နှင့်အတူပေးအပ်သည်ကို ထောက်. , မြင်ကြလိမ့်မည်။ သာလွန်အပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများ်ထမ်းများ၏အများစုအစားထိုးထားသည်။ သူတို့စက်မှုထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ပေမယ့်အနုပညာလက်ရာများထွင်းထုကြသည်မဟုတ်တူသောအများအပြားလုပ်သားများဓာတ်မီးအောက်မှာဆိုက်တစ်ခုခုကိုအရောင်ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် ... ဆရာဝန်တွေနဲ့တူထုတ်ကုန် "ရှာဖွေရေးမှာ" ရုတ်တရက်အားလုံးမှဂရုတစိုက်စမ်းသပ်ကိရိယာများကိုကိုင်ထားသူကခံစားရပါတယ်။ ဒါဟာတရားမျှတတဲ့အတွက်မိတ်ဆက်ပြသ, Ltd. အမျိုးမျိုးသောဟိုက်ဒရောလစ်ဆို့ရှင်ကဒီထုတ်လုပ်မှုလိုင်းမှာမွေးဖွားခဲ့, XCMG ဟိုက်ဒရောလစ် Co. , ၏ဟိုက်ဒရောလစ်ဒြပ်စင်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုက်ဒရောလစ်လယ်ပြင်၌ All-န်းကျင်အောင်မြင်မှုများအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ 2012 ခုနှစ်, XCMG လုပ်ရပ်များကို ယူ. နှစ်ခုဥရောပကျော်ကြားတဲ့ဟိုက်ဒရောလစ်ထုတ်လုပ်သူဝယ်ယူ - နယ်သာလန်ကနေဂျာမနီနှင့် AMACA ထံမှ FT; တစ်ချိန်တည်းမှာ, XCMG လည်းဂျာမနီမှာဥရောပ R & D စင်တာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အဓိကဒြပ်စင်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဟိုက်ဒရောလစ်အဆို့ရှင်, စုပ်စက်, မော်တာနှင့်အသိဉာဏ်ကိုထိန်းချုပ်အဖြစ်သော့ချက်နည်းပညာများကိုအာရုံစိုက်ဖို့ 360 သန်းယူရိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ High-end core ကိုအောငျနိုငျအတွက်ခိုင်မာတဲ့တိုက်ပွဲများအစွမ်းသတ္တိကိုကွိုးစားအားထုမှသကဲ့သို့ဒီအားကောင်းတဲ့ layout ကိုလက်အောက်တွင် XCMG ဟိုက်ဒရောလစ်နယ်သာလန်, ဥရောပသုတေသနဌာနနှင့်တူသောထံမှ AMACA, ဂျာမနီကနေ FT နဲ့ပိတ်ထားတကမ္ဘာလုံး-ညှိနှိုင်း, အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေနှင့်အပြန်အလှန်ထောက်ခံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးမျိုးကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ ဟိုက်ဒရောလစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကို။ ဒီတရားမျှတတဲ့များတွင်လျှပ်စစ် rotary ခေါငျးအုံးအဆို့ရှင်သည်ဤသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ecosphere အတွက်အောင်မြင်သည့်ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။
ရိန်း၏ Swing အရေးယူဖြေရှင်းဖို့ဥရောပ R & D Center က, ဆရာဝန် Fei Kaoyin အတွက်အတွေ့အကြုံအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်, အထူးစစ်ဆင်ရေးတိုးတက်လာဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ "CES Optimization" စီမံကိန်း, စွမ်းအင်ချွေတာစွမ်းဆောင်မှုနှင့်တည်ငြိမ်အတွက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ခေါငျးအုံးအရေးယူ update လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ဆရာဝန် Fei Kaoyin တစ်ချိန်ကအကြိမ်ပေါင်းများစွာအဘို့အရူပါရုံကိုကွန်ဖရဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ရင့်ကျက်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်အဆိုပြုချက်ကိုနှင့်အတူလက်ရှိဟိုက်ဒရောလစ်အဆိုပြုချက်ကိုအစားထိုးရန်အတွက်သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူပြင်းထန်စွာစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ အဆုံး၌, ရိန်း၏ Swing အရေးယူနားလည်သဘောပေါက်ရန်လျှပ်စစ်အချိုးကျကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပထမဦးဆုံးအတက်ကြွကြားခံ function ကိုအဲဒီမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ novel လျှပ်စစ် rotary ခေါငျးအုံးအဆို့ရှင်ထပ်မံ stably XCMG ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်နည်းပညာများအသစ်အောင်မြင်မှုများတိုးတက်ကောင်းမွန်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှု, swinging ကာလအတွင်းပိုမိုတည်ငြိမ်ချောမွေ့ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့သောညှိနှိုင်းသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကို XCMG အမျိုးမျိုးဟိုက်ဒရောလစ်အဆို့ရှင်ထုတ်ကုန်မိသားစုများကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါးအဆို့ရှင်လုပ်ငန်းများ၌နေကြတယ် 8 နေ့ရက်ကာလ၌, နှစ်စုံစုဝေးနေကြသည်နှင့်တစ် set ကိုစမ်းသပ်နေသည် ... ဒီ XCMG ၏ဟိုက်ဒရောလစ်ဆို့ရှင်အဘို့ကို CES အသင်း၏လက်ရှိသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကို XCMG ၏ဥရောပသုတေသနဌာနကဦးဆောင်နေသည်နှင့် XCMG အကြီးစားစက်ပစ္စည်း, XCMG ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့် XCMG Institute ကကထောက်ခံသည်။ XCMG ၏ဟိုက်ဒရောလစ်ဆို့ရှင်သိသိသာသာထိုကဲ့သို့သောထိန်းချုပ်ရေး, ထောက်လှမ်းရေးနှင့်အရေးယူတည်ငြိမ်ကဲ့သို့သောကုန်ကျစရိတ်, အလေးချိန်နှင့်တုန့်ပြန်အချိန်အဖြစ်ထုတ်ကုန် parameters များကို၎င်း, စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းအတွက်တိုးတက်နေကြသည်ဒါမှလေး arty ညှိနှိုင်းသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်သဘောပေါက်သည်။ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့် XCMG ၏အစိတ်အပိုင်းများများအတွက်တဲများတွင်အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလို, သူတို့၏ "ထောက်လှမ်းရေး" နဲ့ outshine ရာ XCMG ၏ဟိုက်ဒရောလစ်ဆို့ရှင် "ပြီးပြည့်စုံသောဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ကဖြေရှင်းချက်ပေးသူ" ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသွားကြဖို့တတ်နိုင်သောအတူ "သစ်ကို Trump" ဖြစ်လာကြပြီသင်ပြောပြ APVM အထိခိုက်မခံမျိုးစုံယူနစ်အဆို့ရှင်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျော်ကြားတဲ့ဆိုင်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အထူးတီထွင်ခြင်းနှင့် 250,000 သက်ရောက်မှုစမ်းသပ်မှုနှင့် 20000 အသွားအပြန်စမ်းသပ်မှုခုခံတွန်းလှန်နိုင်ကြသည်ထားတဲ့လက်စွဲပြောင်းလဲမှုအဆို့ရှင် loaded ကဲ့သို့သော, XSV ဒုက္ခ-အခမဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်သက်ရောက်မှု 1,000,000 ကြိမ်ထက်ကျော်လွန်သောအထိခိုက်မခံတဲ့မျိုးစုံယူနစ်အဆို့ရှင် loaded နှင့်ဥရောပနှင့်ထောက်လှမ်းရေး-ထုတ်လုပ်သော-In-တရုတ် APV မျိုးစုံယူနစ်အဆို့ရှင်။
"စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေး" နဲ့ "အစိမ်းရောင် Pass နှင့်" Build
ပစ္စည်းကိရိယာကုန်ထုတ်လုပ်မှုအမျိုးသားရေးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အခြေခံဖြစ်သကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်စက်မှုဇုန် update ကိုများနှင့်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများနည်းပညာတိုးတက်မှု၏အရေးကြီးသောအာမခံချက်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ယန္တရားကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းစက်မှုစနစ်ကအဆက်မပြတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့်ပြည့်စုံခဲ့ပြီးသိသိသာသာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်နှင့်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုအထူးတိုးမြှင့်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သျောလညျး, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုလူအများကပိုပိုပြီးထူးချွန်ဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဂေဟစနစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်များ adapter ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်း၏အဓိကဘောင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်, ထိုသို့ပတ်ဝန်းကျင်-friendly ထုတ်ကုန်များကိုသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ခေတ်မှီတတ်၏။ ထိုသို့ပိုပြီးထိရောက်နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာဖြစ်ကြောင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အစိတ်အပိုင်းနည်းပညာများလျှောက်ထားရန်ခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအတန်းအစားပြည်တွင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အစိတ်အပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်, XCMG ဟိုက်ဒရောလစ်, ထုတ်ကုန်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးခြေလှမ်းများအရှိန်မြှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ဒြပ်စင်မွမ်းမံမှုများမှအလင်းအလေးချိန်နည်းပညာများလျှောက်ထားခြင်းနှင့် client များကပိုထိရောက်ကမ်းလှမ်းရန်ကြိုးပမ်းရန်ကျူးလွန်နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်အားဖြေရှင်းချက်နှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြစ်ပါတယ် ။
"Light-အလေးချိန်အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အမျှကျနော်တို့ကိုဖန်တီးရန်နှစ်ပေါင်းများစွာ ယူ. , ကနောက်ထပ်မီးအင်ဂျင်ခြုံငုံစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုမြှင့်တင်ရန်ခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးစံပြစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုစွမ်းဆောင်ရည်ရောက်စေဖို့သကဲ့သို့အနာဂတ်၌, ငါတို့သည်လည်းတတိယမျိုးဆက်နှင့်စတုတ္ထယေဘုယျအလင်းအလေးချိန်ထုတ်ကုန်ကိုဖွင့်လိမ့်မည်။ "XCMG ဟိုက်ဒရောလစ်၏ထုတ်ကုန်များအတွက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒီဇိုင်နာ Zhang က Qingkou အားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒီအလင်းအလေးချိန်ယှဉ်ပြိုင်ထုတ်ကုန်လူမီနီယံမှန်ပြောင်းပိုက်ဖြစ်ပါသည် ဒီ bauma မျှတသောဖြန့်ချိ။ ဒါဟာတရုတ်အတွက်ပထမဦးဆုံးအမှုပါပဲ။ ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကိုအပ်သောအခါ, client အားလုံးတဦးတည်းလက်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သောချွင်းချက်မပါဘဲအလင်းအလေးချိန်နည်းပညာအားဖြင့်အထင်ကြီးခဲ့ကြသည်။ မြင့်မားသောအစှမျးသတ်တိလူမီနီယံအလွိုင်းပုံမှန်အစည်းအဝေးသံမဏိပိုက်ထက် 2/3 ငယျဆုံးသောအရာအလေးချိန်၏ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းအတွက်မွေးစားဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်မျက်နှာပြင်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာနှင့်ပံ့ပိုးကူညီမှု-oriented နည်းပညာအထူးလည်းလျှောက်ထားနေကြပါတယ်။ ဒီထုတ်ကုန်မြင့်မားတဲ့ wear ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်မျက်နှာပြင်, ခိုင်မာသောသည်ထို့ကြောင့်၎င်း၏ရှိုတင်စွမ်းရည်တိုးတက်နေသည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဘဝကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျကအဓိက frame ရဲ့ပါဝါစားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေမသာပေမယ့်ပြည်တွင်းမီးအင်ဂျင်တင်သွင်းလူမီနီယံအလွိုင်းပိုက်အပေါ်မှီခိုဖို့လိုအပ်ဘယ်မှာအရှင်လုံးဝပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုကင်းရှင်းကိုလည်းပိုမိုပေါ့ပါးပြီးပိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။
စိတျအပိုငျးမြား၏လျှောက်လွှာများနှင့်အစိတ်အပိုင်းအလင်းအလေးချိန်နည်းပညာအဓိက frame ရဲ့စွမ်းအင်ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစွမ်းဆောင်မှုဖို့အရေးကြီးသည်။ အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောရိန်း, loader နဲ့စုပ်စက်ကုန်တင်ကားအဖြစ်အားလုံးဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါထုတ်ကုန်, အထူးအဓိက frame ရဲ့ယခင်သုတေသနနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဝိသေသလက္ခဏာများ၏အမွေကိုအပေါ်အခြေခံပြီးဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ဝတ္ထုစွမ်းအင်ချွေတာထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ အဆက်မပြတ်အလင်းအလေးချိန်လျှောက်လွှာ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာ optimization နဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားဖြည့်ခြင်းအားဖြင့်, ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်ကောင်းသောစက်မှုနှင့်နည်းပညာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူပေးအပ်ခံရပါစေသကဲ့သို့ရိုးရာဆလင်ဒါပစ္စည်းများအစားထိုး High-အစှမျးသတ်တိဝတ္ထုပစ္စည်းများအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်, ပုံမှန်ထုတ်ကုန်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးပြည့်စုံဆလင်ဒါ၏အလေးချိန်အထက် 20% လျော့နည်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအလင်းအလေးချိန်ထုတ်ကုန်များ၏အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဦးတည်ချက်ကိုဦးဆောင်နေသည်။
ထိုအတောအတွင်းမှာတော့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အစိတ်အပိုင်းတဲအတွက်ပြ remanufacturing နည်းပညာကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောအမြင့်ဆုံးအလျင် oxy-လောင်စာဆီနှင့် plasma Electrolyte တွေချောအဖြစ် "အစိမ်းရောင် Pass နှင့်" တည်ဆောက်ခြင်းမှအရေးပါသည်။ အခုတော့ remanufacturing စက်မှုလုပ်ငန်းတဖြည်းဖြည်းဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းတက်ကြွစွာရှာဖွေထုတ်လုပ်ကြိုးစားနေအဖြစ် XCMG ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောအပိုင်းသော့ချက်နည်းပညာများ၏တဦးတည်းအများဆုံးအတိုင်းအတာအထိထုတ်ကုန်များ၏ကျန်ရှိနေသောတန်ဖိုးများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ချမှတ်။ သောချန်နယ်အသစ်တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲနေသည် အပြည့်အဝထုတ်ကုန်များ၏တန်ဖိုးကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ remanufacturing နှင့်အဓိကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြုပြင်နည်းပညာသုတေသနအာရုံစိုက်ပြီး remanufacturing စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘောင်နှင့်နည်းပညာသုတေသနသည့်စနစ်ဖွဲ့စည်းရန်အထူးတစ် remanufacturing နျဌာနခှဲအထိသတ်မှတ်ထားသည်။ Know-ဘယ်လိုထိုးဖောက်နှင့်မြှင့်တင်ရေးလျှောက်လွှာရလဒ်များကို remanufacturing အများကြီး, အကြီးစားသံမဏိကုမ္ပဏီများနှင့်အမေရိကန်တင်သွင်းဆလင်ဒါ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့အမိန့်၏အောင်မြင်မှုကြီးမား-အရွယ်အစားတန်ချိန် remanufacturing စီမံကိန်းများအနိုင်ရလေလံဆွဲမှုနှင့်အတူက Post-စျေးကွက်အခြားဖြစ်လာသည်ကောက်ချက်ချသက်သေပြနေသည် ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုများမြင့်တက်အချက်။
8000 နာရီ "indestructible" ဝန်ဆောင်မှုဘဝ, "ချစ်ပ် 'ကနေစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ပါ
ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းအမြဲပြင်ပမှာလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသဲမုန်တိုင်းနှင့်အစိုဓာတ်အဖြစ်ပြင်းထန်အခြေအနေများအားဖြင့်စိန်ခေါ်နေသည်နှင့်အမျှပိုမိုထုတ်ကုန်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တနည်းအားဖြင့်လမ်းကြောင်းသစ်စက်မှုနည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးဆဲထားတဲ့နေပါစေ, ထုတ်ကုန်များတည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရအမြဲကျနော်တို့လိုက်နာသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံး concept ကိုဖြစ်ရပါမည်။ ဤသည်ကိုလည်းပူးတွဲဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူနှင့်၎င်းတို့၏ထောက်ပံ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေးသွင်းခြင်းဖြင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ကိုပထမဦးဆုံးဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ "indestructible အဆင့်မြင့်နည်းပညာ," ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်၏ရွှေစံအဖြစ်, XCMG လည်း key ကိုအဓိကနည်းပညာများနှင့်အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအပေါ် retargeting နှင့် refocus ၏ပန်းတိုင်များကိုဆောင်ခဲ့လေ၏။ ဦးဆောင်ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါထုတ်လုပ်သူအဖြစ်, XCMG ဟိုက်ဒရောလစ် 8000 နာရီ "indestructible" စွမ်းဆောင်မှုနှင့်အတူဤစံဖို့စိတ်ကျေနပ်စရာစက္ကူတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
တူးဖျောသူဟောက်လိုက်တဲ့အခါ "Bang-" သြစတြေးလျ၏ Pilbara ဧရိယာ၌တဦးတည်းဆောက်လုပ်ရေး site ကိုနောက်တဖန် buzzing ခဲ့သည်။ ဒီသတ္ထုတူးဖော်ရေးအီကွေတာနှင့်နီးစပ်သောနှင့်ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောဧရိယာ, နှင့်ပြင်ပအပူချိန်အမြဲ 37 °ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအရာများ၏ခုနှစ်, super-ကြီးမားသော-အရွယ်အစားတန်ချိန်တူးဖော်ဆက်တိုက် 8000 နာရီ 8000 အမှား-အခမဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေလုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ထိုသို့သောရလဒ်အတွင်း၌ပြောင် XCMG ၏ဟိုက်ဒရောလစ်ထုတ်ကုန်များ၏အလင်းမှ attribute ဖြစ်ပါတယ်။ "တရုတ်ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ၏ပြတ်ရွေ့-အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုအချိန်ပင်အချို့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပထမဦးဆုံးအတန်းအစားထုတ်ကုန်ခြင်းဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် XCMG ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုကျနော်တို့တရုတ်ထွက်တူး '' ကျောက်မျက် '' များမှာ! "ဒီသြစတြေးလျသတ္တုတွင်းဧရိယာ၏ဤပစ္စည်းကိရိယာများဒါရိုက်တာ၏မိန့်ခွန်း XCMG ၏ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါထုတျကုနျမှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုပြန်ပါသည်။ သူတွေအကြောင်းစကားပြော "ကျောက်မျက်ရတနာ" အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့် XCMG ၏အစိတ်အပိုင်းများရဲ့တဲထဲမှာဖော်ပြပါတယ်တူးဖော်၏ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့်မြင့်မားသောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအခက်အခဲများနှင့်ရှုပ်ထွေးအပြောင်းအလဲနဲ့ technique ကို၏အချိန်ကြာမြင့်စွာ, ပေါင်းအဓိက frame ရဲ့ဆိုးရွားသောအလုပ်လုပ်အခြေအနေများအဘို့, တူးဖော်ကူရှင်နှင့်အလုံအဘို့အမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါအကြား "သရဖူ" အဖြစ်မှတ်စီ update ကမီးမောင်းထိုးအောက်နေကြသည်။ စူပါကြီးမားသော-အရွယ်အစားတန်ချိန်တူးဖျောသူမြား၏စန်းဆလင်ဒါဤအချိန်တည်ဆဲနည်းပညာအခြေခံများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများနိုင်စွမ်း၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားအတွက် XCMG ဟိုက်ဒရောလစ်အားဖြင့်သုတေသနပြုခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သောပြည်တွင်းအကြီးဆုံး-အရွယ်အစားတန်ချိန်တူးဖော်ဆလင်ဒါဖြစ်ပြီးပြ။ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့် XCMG ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနိုင်ငံတကာမှာအဓိကယှဉ်ပြိုင် product အဖြစ်အသစ်ပစ္စည်းများတစ်ခုစီးရီး၏လျှောက်လွှာအသစ်နည်းပညာများနှင့်အသစ်နည်းစနစ်ပြည်တွင်းစူပါအကြီးစားတူးဖော်၏ဆလင်ဒါနည်းပညာကလေးကိုပါကတဆင့်ချိုးဒါပေမယ့်လည်းအဓိက frame ရဲ့ကျယ်ပြန့်ချီးမွမ်းအနိုင်ရမသာ အသုံးပြုသူများသည်အိမ်တွင်သို့မဟုတ်ပြည်ပမှာ။ ဒါဟာတစ်ချိန်ကကိုတဖန် "indestructible အဆင့်မြင့်နည်းပညာ," ၏ထုတ်ကုန်အယူအဆဖို့အကောင်းဆုံးအနက်ကိုပေးသည်။
ထို့အပြင်အချို့ထူးဆန်းတဲ့-looking "သံထွက်ပစ္စည်းများ" ကိုလည်း "မကျြမွငျချန်ပီယံ" ၏ "တီထွင်" စစ်တုရင်ဖို့ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံမှုပူဇော်ရသောတဲအတွက်လည်းရှိပါတယ်: ကသုံးအလားတူ-ရှာဖွေနေဆလင်ဒါ၏ရေးစပ်နှင့် "သုံးမွှာပူး" အဖြစ်ချစ်စနိုးဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးကိုအထူးသုံးဆလင်ဒါ sequential တယ်လီစကုပ်စက်ကိုလျက်ရှိ၏ လော်ရီကုန်-တပ်ဆင်ထားရိန်း၏မျိုးစုံအဆင့်တယ်လီစကုပ် jibs ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ hoisting အပေါ်အခြေခံပြီး, ထုတ်ကုန်, သုံးဆလင်ဒါထပ်နေရာချထားမှတဆင့်သိသိသာသာအဓိက frame ရဲ့တငျမွှောကျစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ပေမယ့်လည်း lorry- ၏အဓိက frame ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ optimization နှင့်နည်းပညာ update ကိုနေမှုမသာ ရိန်းတပ်ဆင်ထား; Self-သော့ခတ် end-Self-သော့ခတ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ထိရောက်စွာ 28 အဆိုပြုချက်ကိုတိုးတက်မှုများနှင့်စမ်းသပ်မှုများမှတဆင့်ပြီးစီးတပြင်လုံးကို-ဖြစ်စဉ်ကို-Self-သော့ခတ်ဆလင်ဒါအလတ်စားဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ၏ကိုယ်ထည်စတီယာရင်လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်, ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်ခြင်းတိကျမှန်ကန်မှုအဖြစ်အများအပြားရှုထောင့်မှာရှိတဲ့နည်းပညာအောင်မြင်မှုများနားလည်သဘောပေါက်, တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းနှင့် သော့ခတ်အစိတ်အပိုင်းများဝန်ဆောင်မှုဘဝနှင့်အတိတ်နှစ်ပေါင်းများစွာနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုအသက်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရထိုသို့သောပြည်တွင်းဒြပ်စင်များနှင့်တင်သွင်းထုတ်ကုန်များအကြားကွာဟချက်ကိုဖြည့်, မျက်နှာပြင်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာ, ဂဟေဆော်နည်းပညာနှင့်ကုန်ကြမ်းနည်းပညာဖေါ်ပြခြင်းအမျိုးမျိုးသောနည်းပညာဆိုင်ရာနမူနာ core ကိုအစိတ်အပိုင်းများနှင့် "indestructible" ၏အဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့အခြေခံ technique ကိုသုတေသနပြုဖွပေးသော XCMG ၏အစိတ်အပိုင်းများတည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရမှခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံမှုပေးပါ။
"ထို့ပြင်, နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အတူဟိုက်ဒရောလစ်လယ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာသာလွန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရ။ " တရုတ်စီးပွားရေး၏အသစ်ကပုံမှန်အားဖြင့်ယူဆောင်ညှိနှိုင်းမှုအလုပ်သမားနေဆဲဆက်လက်ပေမယ့်, "ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံမှု" နဲ့တပ်ဆင်ထား XCMG ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများဟာတီထွင်မှုအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့ပြန်လာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည် ။ XCMG ၏ "မမြင်ရတဲ့ချန်ပီယံ" "ဧဝရက်တောင်ထိပ်ကိုရောက်ရှိ" ကိုခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ် High-end-core အစိတ်အပိုင်းများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းများများအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်, ဤ High-end အောင်မြင်မှုများ "တီထွင်မှုစစ်တုရင်" အနိုင်ရနှင့်လောလောလတ်လတ်မှ bauma တရုတ် 2016 ကနေ start ဒီကနေကမ္ဘာကြီးကိုဆီသို့တိုးနှင့် "တရုတ်မှာရှိတဲ့စေ" ၏ကျန်းမာသန်စွမ်းတက်ကြွတိုက်ဖျက်မည်!
24 နာရီ hotline: 0086-13916689101
Skype ကို: andyding82
အမေရိကန်တစ်ဦးက LINE DROP!